मोहन विक्रम्-चुनाबी प्रणाली बारे । | मेरो चौतारी
« Japan to fingerprint, photograph foreigners from Nov 20
पत्रकार -आङ छिरिङ शेर्पालाई युके शेर्पा किदुगको कदरपत्र »
मोहन विक्रम्-चुनाबी प्रणाली बारे ।
Published October 11, 2007	news , articles 1 Comment
कोइरालाको सकारात्मक अडान -चुनाबी प्रणाली बारे ।
माओवादीहरुले अगाडि सारेको पूर्ण समानुपातिक प्रणालीविरुद्ध प्रधानमन्त्री कोइरालाको अडान सकारात्मक छ र त्यसलाई हामी स्वागत गर्दछौं । पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको आधारभूत कमजोरी यो हो कि, त्यसले सम्पूर्ण जनतालाई प्रत्यक्ष रुपले आफ्ना प्रतिनिधिहरु चुन्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्दछ । त्यो प्रणाली अर्न्तर्गत राजनैतिक दलहरुद्वारा मनोनित प्रतिनिधिहरु मात्र चुनिन्छन् । जनताले राजनैतिक दलहरुलाई मत दिएपछि उमेदवारमध्ये अन्तिम छनोट गर्ने अधिकार राजनैतिक दलको नेतृत्वलाई मात्र हुन्छ । अहिले देशमा मिश्रित चुनाव प्रणाली अर्न्तर्गत संविधानसभाका आधा प्रतिनिधिहरुको चुनावका लागि समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको छ । समानुपातिक प्रणाली अर्न्तर्गत संसदमा भएका वा १० हजार नागरिकहरुको हस्ताक्षर पेश गर्न सक्ने दलले मात्र चुनावमा उमेदवारहरु खडा गर्न सक्छन् । यो प्रणालीले दलहरुको घेराभन्दा बाहिर कोही पनि संविधानसभाको चुनावको लागि उमेदवार हुन सक्दैनन् ।
प्रत्यक्ष चुनाव अर्न्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना प्रतिनिधि चुनिन्छ । त्यो प्रतिनिधिको आफ्नो क्षेत्र वा त्यहाका जनतासित प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । तर पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाइएमा कुनै क्षेत्रको प्रतिनिधि संविधानसभामा हुदैन । दलीय आधारमा निर्वाचन हुदा कैयौं जिल्ला वा अञ्चलहरु पनि प्रतिनिधिविहीन हुन सक्छन् । त्यसैले प्रायशः समानुपातिक चुनावका साथै भौगोलिक पक्षलाई आधार बनाएर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाइने गरिन्छ । त्यसलाई मिश्रित चुनाव प्रणाली भनिन्छ । प्रत्यक्ष वा बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको एउटा आधारभूत विशेषता यो हो कि त्यसले देशका प्रत्येक भागको प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसप्रकारको अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक चुनावमा एकतर्फी जोड दिने चिन्तन पूरै गलत छ । त्यसैले आठदलले मिश्रति प्रकारको चुनाव प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेर ठीक गरेका छन् ।
नेकपा मसालका प्रवक्ता तथा तात्कालिक जनमोर्चा, नेपालका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले संविधान सुझाव आयोगमा दिएको सुझावको बुदा नं. १२ मा निर्वाचन प्रणालीको चर्चा गर्दै भनिएको थियो “चुनावका लागि मिश्रित प्रणाली अपनाइने छ । त्यसअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणाली अपनाएर निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ ।” त्यो बेलादेखि हामीले लगातार मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिंदै आएका छौं र हाम्रो त्यो अडान कायम छ । तर माओवादीले त्यो बेला मिश्रित चुनाव प्रणालीमा जोड दिएको थियो । तर अब स्वयं आफ्नो पहिलेको अडानलाई छाडेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको अडान मात्र लिएको छैन, त्यसको त्यो माग स्वीकृत नभएमा संविधानसभाको चुनाव नै हुन नदिने घोषणा गरेको छ । अन्तमा उसको त्यो अडानले मंसिर ६ गते हुने ठेगान भएको संविधानसभाको चुनाव स्थगित हुन गएको छ र भविष्यमा पुनः त्यो सम्पन्न हुने हो वा होइन, अनिश्चयको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
गतकालमा सातदलले बारम्बार माओवादीप्रति दब्बूपन प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । त्यसबाट सरकारको नीति र भूमिका वा देशको राजनैतिक स्थितिमा पनि धेरै क्षति पुगेको छ । प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाबाट पनि बारम्बार त्यसप्रकारका गल्तिहरु हुने गरेका छन् । तर यो खुसीको कुरा हो कि अहिले प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र नेपाली कांग्रेससहित सत्तारुढ कैयौं दलहरु पूर्ण समानुपातिक चुनावविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएका छन् । त्यसप्रकारको दृढता सम्पूर्ण देश र जनताका हितमा छ । यदि अहिले पनि सत्तारुढ दलले माओवादीप्रति पहिलेको जस्तो दब्बू नीति अपनाएको भए त्यसबाट प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई धेरै नै नोक्सान पुग्ने थियो र त्यसका कैयौं नकारात्मक परिणामहरु आउने थिए । भविष्यमा पनि माओवादीका त्यसप्रकारको मागका विरुद्ध दृढ अडान लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अन्य दलहरुले सही र दृढ अडान लिएकोले माओवादीको पूर्ण समानुपातिक चुनावको माग पूरा भएन । तैपनि त्यसको एउटा परिणाम संविधानसभाको चुनाव स्थगित भयो । आज देशमा यसबारे व्यापक छलफल चलिरहेको छ । त्यसबारे वेग्ला वेग्लै मतहरु देखा परिरहेका छन् । त्यो विषयमा अनावश्यक विवाद पैदा गर्ने काम भैरहेको छ । यसबारे खुला रुपमा सवैका अगाडि घटेको घटना, अर्का शब्दमा, प्रत्यक्ष र खुला रुपमा अगाडि आएको तथ्यबारे कुनै शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । सम्पूर्ण देश संविधानसभाको दिशामा अगाडि गईरहेको थियो । माओवादीको नीति वा भूमिकाका कारण चुनाव स्थगित भयो । त्यसकारण त्यो चुनाव स्थगित हुनका लागि माओवादी समूह नै मुख्यरुपले जिम्मेवार छ । निश्चय नै मुख्यरुपले त्यसको अर्थ यो हो सत्तारुढ अन्य दलहरु पनि त्यसकालागि जिम्मेवार छन् । तर उनीहरुको कमजोरी यति मात्र हो कि उनीहरुले माओवादीको संविधानसभाको चुनाव विरुद्धको षडयन्त्रको सफलतापूर्वक सामना गर्न सकेनन् ।
संविधानसभाको चुनावसित जोडिएको अर्को अभिन्न प्रश्न हो माओवादीको आसन्न भूमिका । गतकालमा उनीहरुको उग्र”वामपंथी” गतिविधि वा सामाजिक फासिवादी र सैन्यवादी प्रकारको कारवाहीद्वारा सारा देश आक्रान्त थियो । सातदलको मुख्य समस्या वा भय यो हो कहीं उसको त्यहीप्रकारको गतिविधिको पुनरावृत्ति हुने त होइन । त्यसप्रकारको भय वा दवावका आडमा माओवादीले सात राजनैतिक दलहरुको धेरैपल्ट भयदोहन गर्ने गरेको छ । त्यो समस्या अहिले पनि विद्यमान छ । चुनावको मिति स्थगित भएको छ । तर माओवादीले बारम्बार पूर्ण समानुपातिक चुनावको माग परिवर्तित नभएको दावी गरेको छ । त्यो अवस्थामा यो आशंकालाई उपेक्षा गर्न सकिन्न त्यो माग पूरा नहुदासम्म सत्तारुढ दलहरु वा सरकारले संविधानसभाको मितिको घोषणा गर्न सक्ने छैनन् वा मितिको घोषणा भए पनि माओवादीका कारण चुनाव सम्पन्न हुन सक्ने छैन । त्यसरी माओवादीको नीति वा भूमिकाका कारण देश गम्भीर प्रकारको गोलचक्करमा फसेको छ । त्यसको निकासको उपाय के हो – यसबारे सम्पूर्ण राजनैतिक दल वा जनताले गम्भीर प्रकारले सोंच्नु पर्ने आवश्यकता छ । माओवादीप्रतिको दब्बुपन वा उनीहरुका गलत मागहरुका अगाडि आत्मर्समर्पणको नीति सही समाधान होइन । त्यसले स्थितिलाई झन् जटिल र कठिन बनाउदै जानेछ । त्यसका लागि यो आवश्यक छ कि माओवादीका सवै गलत नीतिहरुका विरुद्ध सिद्धान्त, नीति वा देश र जनताका हितको पक्षमा दृढ र सम्झौताहीन नीति अपनाइयोस् ।
माओवादीले संसदद्वारा गणतन्त्र र पूर्ण समानुपातिक चुनावका मागहरु अगाडि सारेर संविधानसभाको चुनावमा बाधा पुर्‍याएको छ । तर यहा यो प्रश्न पनि नउठाइ रहन सकिन्न माओवादीले यी माग अगाडि सारे पनि अन्य कुनै छद्म उद्देश्यहरु पूरा गर्न संविधानसभाको चुनाव हुन नदिन खोजेका त होइन । शायद यो प्रश्नको ठीक जवाफ पाउन हामीले अरु केही समय पर्खनु पर्नेछ ।
सिंह नेकपा मसालका महामन्त्री हुन्
1 Response to “मोहन विक्रम्-चुनाबी प्रणाली बारे ।”
1 cheeju October 11, 2007 at 3:24 pm
Nice post!!! But Constitutional Assembly has been postponed, I’m very much surprised that why maoist do this? Keep it up…….. :-)